Yemen: tonga amin’ny mangotrakotraka? (Video) · Global Voices teny Malagasy
Yemen: tonga amin'ny mangotrakotraka? (Video)
Voadika ny 28 Febroary 2011 14:46 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Italiano, 繁體中文, 简体中文, English
Manomboka manova ny rivotra politikan'ny firenena ireo herinandron'ny tolona ataon'ireo mpomba sy mpanohitra ny governemanta any Yemen.
Ny Alarobia 23 Febroary, ny Filoha Ali Abdullah Saleh dia niteny tamin'ireo hery fiarovana mba handray fepetra amin'ny herisetra eo amin'ireo mpitolona. Nibaiko ireo miaramila i Saleh mba hanasaraka ireo vondrona mpomba sy mpanohitra ny governemanta mba hampihena ny mety hisian'ny ady eo amin'ny roa tonta.
Natao izany taorian'ny namopasan'ireo “jiolahimboto” mpomba ny governemanta antsy sy basy mba hanafihana ireo mpianatra manao fitokonana manohitra ny governemanta ao amin'ny Anjerimanontolon'i Sanaa, nahafaty olona iray fara-fahakeliny ary nandratrana olona 20 mahery. Nitarika ny fialàn'ny olona fito mpikambana ao amin'ny Antenimiera izany herisetra izany.
Ao amin'ny YouTube, belaquood dia nampiakatra video tamin'ny 23 Febroary, mampiseho mpitandro filaminana manasaraka ireo mpitolona avy amin'ny firehana politika samihafa. Ny lohatenin'izany dia: “Misaotra an'ireo mpitandro filaminana nibahana ny jiolahimboto.”
Azo antoka fa ho voatsapa ny fahatsaram-panahy. amin'ny 24 Febroary no nisy ny tolona tany Sanaa, Aden ary Hodeidah, tanàna fahaefatra lehibe indrindra any amin'ny firenena. Nisy baomba nipoaka tany amin'ny tanàna tatsimo any Lawdar, namono olona iray fara-fahakeliny.
Farany, mpikambana 11 hafa tao amin'ny antenimieran'ny antoko mitondra no nametra-pialana araka ny notaterina.
Avy amin'ny Twitter:
@shephardm: Reuters dia mitatitra fa namono olona iray ary nandratra roa ny baomba nandritra ny fihetsiketsehana tany Aden. Afovoanin'ny hetsika tatsimo fanasarahana ny tanàna. #yemen. #yf.
@JNovak_Yemen: Namono olona 1 ny baomba tany #Yemen (teny 2 – fisoloana tsy azo lavina) #YF #Saleh http://bikyamasr.com/wordpress/?p=28451
Anatina Tweet hafa avy amin'ny tranga ny Alakamisy:
@alnitak250: Tolona manerana ireo tanàn-dehibe any #Yemen androany – any amin'ny an'i Sana'a any amin'ny anjerimanontolo manohita ny fitondrana, ny mpomba ny fitondràna any amin'ny kianja Tharir – manahy fa mety hifandona ireo vondrona roa #YF
@c0ri: Oay, tena mangotrakoraka i #Yemen. Maro lavitra noho izay efa hitako ny mpitolona androany. Mieritreritra aho fa tonga amin'ny toerana nisy an'i #Egypt tapa-bolana lasa izay ry zareo.
@ThomasFan2010 Fahefana ho an'ny Vahoaka!!! #Yemen!
@shephardm: Nilamina ny tany amin'ny toby mpanohitra an'i Saleh talohan'ny nilentehan'ny masoandro. Vao avy nijery fanambadiana aho raha ny marina. Tranolay, ny olona mitsakotsako qat, mihorakoraka hoe “mialà Ali.” #yemen.
Araka ny voalaza ihany dia nisy lehilahy tsy an'asa iray namono tena tamin'ny Alakamisy tamin'ny fandoroana tena.
Niantso fanovàna ara-politika sy fialàn'i Saleh ireo mpitolona tany Yemen, araka ny ambaran'izy ireo dia mijery mivadika izy momba ny kolikoly, ny fahantrana ary ny herisetra any amin'ny firenena.
Taorian'ny fionganan'i Honsi Mubarek tany Egipta, Saleh no mpitondra faharoa ela indrindra teo amin'ny fitondràna ary manana fifandraisana akaiky amin'ny Etazonia ka mahatonga azy kendren'ireo mpitolona. Matahotra mafy ny Etazoniaa momba ny isan'ireo mpikambana ao amin'ny Al Qaida any amin'ny firenena, ary Saleh dia nahazo tombony tamin'ny adin'ny Etazonia amin'ny fampihorohoroana. Ny Mpanao Gazety Mikambana dia nitatitra fa ny Etazonia dia nandefa 155 tapitrisa $ ho an'i Yemen ho an'ny fanampiana ara-miaramila tamin'ny 2010.
Tamin'ny Zoma 25 Febroary dia toa nety niahanafana indray ny toe-javatra. Ireo mpomba ny governemanta dia mikasa ny hanao diaben'ny lehilahy iray tapitrisa any Sanaa. Ny mpitatitra iray avy any Yemen dia niteny ny Mpiambina ny tahotra ny mety hisian'ny fifanoherana eo amin'ireo mpanao diabe tsy ny mpianatra mitokona any amin'ny sisin'ny tanàn-dehibe. Nanambara koa ireo Fiombonana fa hanohy hanao diabe manohitra ny fitondràna ry zareo, ka mangataka fanampiana bebe kokoa ho an'ny sakafo sy hanatsarana ny toetry ny fandriampahalemana.
Amin'ny hetsika hafa hiezahana hampitoniana ny mpanohitra,nanolo-kevitra ny hamorona governemanta fiombonam-pirenena i Saleh mandram-piandry ny fifidianana amin'ny 2013. I Saleh dia efa nitondra naomboka tamin'ny taona 1979, ary vao haingana izy no nanome toky fa tsy hilatsaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 2013.
Nitsipaka ny tsaho momba ny governemanta vaovao fiombonam-pirenena ny mpaneho hevitra Jane Novak:
@JNovak_Yemen: #Yemen tetik'i #AliSaleh farany hitazonana ny fahefana, #protests dia ny”governemanta fiombonam-pirenena” http://yemenonline.info/news-1965.html #YF